"Ushaywe ngesagila" bechitha ikhansela ebeliphakanyiswa - Ilanga News
Home Izindaba “Ushaywe ngesagila” bechitha ikhansela ebeliphakanyiswa
“Ushaywe ngesagila” bechitha ikhansela ebeliphakanyiswa
UNKZ Beauty Cele ophophoze igazi waze wayotishwa esibhedlela emuva kokuba eshayiwe kubangwa
ukuphakamisa igama lozoba yikhansela. ISITHOMBE: SITHUNYELWE
ZIYAQONGA izinkinga kwabaga-qele ukuba ngamakhansela e-ANC eThekwini, njengoba leli qembu KwaZulu-Natal, seliveze ukuthi angase ahoxiswe amagama abantu abathile uma kunesidingo esiphoqayo.
Lokhu kuvele emuva kokuba zibe ziningi izikhalo ezindaweni ezizungeze iTheku ngabafakwe ohlwini lwamagama abazoncintisana okhethweni lohulumeni basekhaya, uMengameli Cyril Ramaphosa ayememezele ukuthi luzoba mhla ka-27 kuMfumfu (October) nonyaka.
Sekuwumlando ukuthi i-Independent Electoral Commission (IEC) yaqoka uMnu Dikgang Moseneke osewathatha umhlala-phansi kwesokuba yisekela
lenhloko yamajaji, ukuba ahole ucwaningo lokuthi ngabe kuphe-phile yini ukuthi ukhetho lunga-ba ngalolu suku ngenxa yokubhoka kokhuvethe.
Umbiko wakhe wathi kungaku-hle ukhetho luhlehlele uNhlola-nja (February), wesekwa ngama-nye amaqembu ezepolitiki, okubalwa kuwona i-ANC kanti i-IFP yona yathi kungakuhle
luhlehlele uNhlaba (May).
Izinhlangano zamalungelo aba-ntu, okubalwa kuzona i-Afriforum, zithi kudlalwa ngegeja kuzi-liwe ngokuhlehlisa ukhetho ngoba kabukho ubufakazi obuqanda ikhanda obungaholela kulesi sinqumo, kanti kunjalo nje, uMthethosisekelo nomthetho
iLocal Government Act, kuyavu-melana ngokuthi isikhathi sama-khansela komasipala kumele singeqi eminyakeni eyisihlanu.
Umnqamulajuqu wokuphaka-nyiswa kwamagama abagaqele ukhetho ubungoMsombuluko, okuyilapho zihlale khona obala
izinkinga kwi-ANC eThekwini.
Kusuke esinamathambo ngeSo-nto eChatsworth, okubikwa ukuthi kushaywe owesifazane ngesa-gila emhlanganweni womphaka-thi obukhononda ngokuthi ufu-nzwa obeyikhansela lale ndawo, uMnu Previn Vedan, ongasafuni ukuba abuyele esikhundleni.
UNkz Beauty Cele waseBottlebrush, eChatsworth, uthi usha-ywe ngesagila ekhanda waze wa-yotishwa esibhedlela eRK Khan emuva kokuba yena neqeqebana abehamba nalo, bekhombise ukungahambisani nokuthi iqe-mbu labo lifolose ngaleli khansela.
Ekhuluma naleli phephandaba uNkz Cele, uthe amalungu omphakathi akhonondile, ebuza ukuthi ubuyiselwa kanjani uMnu Vedan njengoba engakaze awe-nzele lutho umphakathi, udoti kawulandwa, kunezindawo ezi-ngenawo ngisho ugesi.
“Abanye kulabo abebekhono-nda basukumile, badabula uhlu lwamagama abephakanyisiwe, kwabe sebezithintele isidleke seminyovu.
“Kukhona othe mabashaywe laba abaphikisana nekhansela, basitheza ekhanda isagila kimina, ngopha. Omunye ugwaziwe kuwo lo mhlangano, abanye
bashaywa ngamaqupha, bagxo-tshwa,” kubalisa uNkz Cele.
UMnu Vedan uthi wayekhona kulo mhlangano, kodwa akakhu-mbuli kukhona oshaywayo ngaphakathi la okwakunomhla-ngano khona.
“Laba bantu balwa ngapha-ndle, kasazi-ke ukuthi babesha-ywa ngobani,” kusho uMnu Vedan.
UMnu Noko Mhlongo oku-nguye osolwa ngokushaya lona wesifazane, uthe uNkz Cele nayehamba nabo bangena lapho kwakunomhlangano khona kwase kuyaliwa.
Uthe abasola yena ngokusha-ywa kukaNkz Cele bazilwela izimpi zepolitiki.
NgoLwesibili amalungu e-ANC abevutha engabaselwe abebhikisha emahhovisi aleli qembu eThekwini, ekhononda ngalo uhlu lwabagaqele ukuba ngama-khansela ngethikithi likaKhongo-lose.
“UmBhishobhi” Sandile Ndlela obekhona kulo mbhikisho, uthi eNtuzuma omunye wabagaqele lesi sikhundla, ufike ephelezelwa ngamadoda abephethe izinhloko-hlela zezibhamu, egade ukuzwa ukuthi ngubani ozophikisa ukuphakanyiswa kwegama lakhe.
UMnu Lindani Sicwala ongomunye wababephambili ekwesekeni, uNkk Zandile Gumede owayeyimeya yeTheku, uthi bafuna uhlu lwamagama luqalwe phansi ngoba kaluhamba-nga ngendlela efanele.
Ekhuluma neLANGA uMnu Nhlakanipho Ntombela okhulumela i-ANC KwaZulu-Natal, uthe ikomidi elibizwa nge-Appeals Committee, eliholwa nguMnu Cyril Xaba, limatasa lithatha uhlu lwezikhalo ezizolalelwa, bese kukhishwa isinqumo.
Uthe uhlu lwamagama luzohoxiswa uma kunesidingo, bese kuqokwa kabusha.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe odabeni lokushaywa kowesifazane eChatsworth, ake-kho osaboshiwe, wathi amaphoyisa asaphenya.
Previous articleUzime ukhuthaza abesifazane ukungafeli ngaphakathi
Next articleUdume njengemali umfana (13) okhanda izimoto